ရွက်ဖျင်တဲပစ္စည်းအထည်အလိပ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-fabricbackpacks.com
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အဆောက်အဦးအပြင်ထည် -> ရွက်ဖျင်တဲပစ္စည်းအထည်အလိပ်
ကျေးဇူးပြုပြီးစစ်ဆေးပါ ရွက်ဖျင်တဲပစ္စည်းအထည်အလိပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှတဆင့်။ ကျနော်တို့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ထုတ်လုပ်သူ, တင်ပို့နှင့်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်နာဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့သည်လည်းဖော်ရွေအလုပ်အဖွဲ့သည်ရှိသည်, ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အကြှနျုပျတို့သညျအဘို့ဿုံအရာအားလုံးကိုပြုနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာကအလွန်ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နားလည်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမုချသင်ပိုကောင်းလုပ်ဖို့ဆိုအခွင့်အလမ်းကိုတွေ့မြင်နျအရေးကွီးစီးပွားရေးနှင့်ကောင်းသော service.If ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်, ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ prompt ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုသေချာပါစေမည်, ကျွန်တော်တို့သိကြကုန်အံ့ကျေးဇူးတင်ပါ။
ပုံစံ: OF 1-1
အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ 1. နိုင်လွန်အထည်အလိပ် 30D ~ 400D & 420D အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်။
ပုံနှိပ်ခြင်း & အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ 2. polyester အထည်အလိပ် 75D ~ 600D ။
3. T က A / C Ripstop & လဲမှို့အထည်အလိပ်ဆေးဆိုးခြင်းနှင့်အတူ, DWR & အပေါ်ယံပိုင်း
4. customized spec အတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
5. အရောငျ: Dual-color ကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ အခြားအစိတ်ကြိုက်အရောင်များကိုလည်းကြိုဆိုပါလိမ့်မည်။
6. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့စုံစမ်းမှုကြိုဆိုပါလိမ့်မည်။
Tent Material Fabric | Tente Tissus | Zeltmaterial Stoff | Палатка Материал Ткань | Tent material de tecido | Tenda Materiale Tessuto | तम्बू सामग्री कपड़ा | Tienda Materiales Tela | Tent Materiaal Fabric | خيمة مادة نسيج | Chất liệu vải lều | วัสดุผ้าเต็นท์ | Tenda Fabric Material | তাঁবু উপাদান তারেক | Çadır Malzeme Kumaş | 帳篷面料 | Tält Material tyg | Tent Material Fabric | Telt Materiale Fabric | Tjald Efni Efni